इन्फ्लूएन्जा खोप ! | Samjhana Laboratory Clinic
इन्फ्लुएन्जा के हो?
इन्फ्लुएन्जा जो प्राय फ्लुको रूपमा चिनिन्छ, माथिल्लो र तल्लो श्वास नलीको ज्वरो, चिसो, थकाइको गहिरो भावना, मांसपेशी दुखाइ, र टाउको र पेटको दुखाइको विभिन्न चरणहरूको गम्भीर बिरामी हो। इन्फ्लुएन्जाले कुनै पनि उमेरका मानिसहरूलाई हानी पुर्‍याउन सक्छ, तर विशेष गरी बच्चाहरू र युवा वयस्कहरूले यस रोगको अधिकतम प्रसारको रिपोर्ट गर्छन्। इन्फ्लुएन्जा वर्षको चिसो महिनाहरूमा सबैभन्दा व्यापक हुन्छ। भाइरस श्वासप्रणालीको माध्यमबाट अर्को व्यक्तिमा फैलिन्छ, उदाहरणका लागि संक्रमित व्यक्तिको खोकी र छींकबाट फ्लुइडहरू मार्फत। फ्लूले गम्भीर स्वास्थ्य जटिलता र सम्भवतः मृत्यु निम्त्याउन सक्छ। विश्व स्वास्थ्य संगठनका अनुसार ६५०,००० भन्दा बढी मानिस मौसमी इन्फ्लूएन्जाबाट आफ्नो ज्यान गुमाउँछन्।
What’s unique about influenza is it’s constantly changing. We’re really concerned about being ahead of the game for detectingavirus that could cause the next global pandemic.
Dr. Jacqueline Katz, the director of WHO’s Collaborating Centre for Influenza. WHO.int
चिन्ता नलिनुहोस्, खोप उपलब्ध छ !
इन्फ्लूएन्जा भ्याक्सिन एक वार्षिक खोप हो जुन तपाईंलाई फ्लूबाट बचाउँछ। फ्लू खोपले इन्फ्लूएन्जा भाइरसलाई आक्रमण गर्न एन्टिबडीहरू बनाउनको लागि तपाईंको शरीरको प्रतिरक्षा प्रणालीलाई उत्प्रेरित गर्दछ। एन्टिबडीहरू प्रोटीन हुन् जसले जीवाणुहरू पहिचान गर्दछन् र लड्न सक्छन्, जस्तै भाइरस, जसले तपाईंको रगतमा आक्रमण गरेको छ। तसर्थ, फ्लू रोक्न उत्तम तरिका भनेको खोप लगाउनु हो। यो खोप प्रत्येक बर्ष सुरु हुनुभन्दा पहिले लगाउनुपर्छ। यो कमजोर व्यक्तिहरूलाई खोप लगाउनु पर्छ जो बच्चाहरू, गर्भवती महिलाहरू, र स्वास्थ्यकर्मीहरू जस्तो भाइरस पक्रने खतरामा छन्। इन्फ्लूएन्जा भाइरसहरू वर्षौं बर्ष फरक हुन सक्ने हुँदा हरेक वर्ष खोपहरू दोहोर्याउन महत्त्वपूर्ण हुन्छ। थप पढ्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्।
कृपया नोट गर्नुहोस् कि खोप रोकथाम शुरू हुन दुई हप्ता लाग्छ, त्यसैले चाँडै खोप लिन आवश्यक छ।
Samjhana Laboratory क्लिनिकमा इन्फ्लुएन्जा खोप लिनुहोस्
हामीलाई थाहा छ कि भाइरसलाई रोकथाम गर्न खोप वास्तवमै अत्यन्त महत्वपूर्ण छ, हामी सबैले सकेसम्म चाँडो आफूलाई खोप लगाउनु पर्छ। तपाईं र तपाईंको परिवार सुरक्षित छ भनेर निश्चित गर्न इन्फ्लुएन्जा खोप लिन Samjhana Laboratory Clinic सम्पर्क गर्नुहोस्।
तपाईं घर खोप सेवा बुक गर्न सक्नुहुनेछ!
थप जानकारीको लागि ०१-५५४६६८४ सम्पर्क गर्नुहोस्, हामी केवल एक कल टाढा छौं!
Antigen testing isanew diagnostic test for Covid-19 that received emergency use by the…